Guddoomiyihii G/Banaadir ‘C/raxmaan Yariisow’ oo aas qaran loogu samaynayo Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddoomiyihii G/Banaadir ‘C/raxmaan Yariisow’ oo aas qaran loogu samaynayo Muqdisho
Guddoomiyihii G/Banaadir ‘C/raxmaan Yariisow’ oo aas qaran loogu samaynayo Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa maanta maagalada Muqdisho aas qaran ugu samaynaysa duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow.
Guddoomiyaha ayaa khamiistii ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada Dooxa ee dalka Qadar oo lagu dabiibayay kaddib dhaawicii kasoo gaaray qarixii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho 24 bishii Julaay.
Meydka duqa Muqdisho ayaa diyaarad gaar ah looga soo qaadayaa dalka Qadar.
Ammaanka waddooyinka maagalada ayaa aad loo adkeeyay iyada oo la dhigay ciidamada dowladda oo hakad geliyay gaadiidka magaalada u kala dhex goosha.
Aaska qaran ee guddoomiye Yariisow ayaa la filayaa in ay kasoo qeyb galaan masuuliyiinta dowladda Soomaaliya ugu sarreeya sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Salaadda janaasada ayaa lagula tukan doonaa marxuumka gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyada oo intaa kaddibna loo galbin doono akadeemiyada Janaraal Kaahiye oo lagu aasi doono.
Weerarkii ismiidaaminta ahaa ee sababay geerida duqa Muqdisho iyo masuulyiin badan oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir ayay sheegatay kooxda al-Shabaab.
Laamaha ammaanka iyo dambi baarista dowladda Soomaaliya ayaanan illaa iyo haatan soo bandhigin natiijada baaritaanka weerarkaas.
aas qaran loogu samaynayo Muqdisho